Shanduko Yemamiriro ekunze Chokwadi cheFlorida Condo Collapse inokonzeresa Njodzi yeMiami Beaches, Tourism, uye mamirionea
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » USA Kuputsa Nhau » Shanduko Yemamiriro ekunze Chokwadi cheFlorida Condo Collapse inokonzeresa Njodzi yeMiami Beaches, Tourism, uye mamirionea
Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hotera & Resorts • LGBTQ • Nhau Dzakanaka • nhau • vanhu • Resorts • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Wetland inogona kukonzera kudonha kwechivakwa. Nzvimbo dzinotambura muSouth Miami Beach
Iyo inoyevedza yekushanya nzvimbo uye imba yemamirioniyari mudunhu reMiami Beach iri munjodzi yekudonha. Tsvagurudzo yaDr.Shimon Wdowinski yakanangana nekusimudzira nekushandiswa kwenzvimbo geodetic matekinoroji anokwanisa kunyatso kuona mafambiro madiki epasi. Akaudza Daily Mail muLondon, akaziva nekukurumidza kuti chivakwa chakadonha nekuuraya vazhinji muSeaside, Florida.
Shanduko Yemamiriro ekunze uye Kumuka kweAcean kungangodaro kuri kukonzera kudonha kwechivako cheFlorida Champlain Tower Condo pamwe nemukana wezvakawanda zvinotevera.
FMumwe muzvinafundo weLorida International University, Shimon Wdowinski akati akaziva ipapo kuti chivakwa chipi chakapunzika paakanzwa mishumo yenhau yeiyo Seaside Champlain Tower South Condo chivakwa muFlorida.
Zvimwe zvivakwa zvitatu zvehotera nemakondoni zviri kunyura nekukurumidza muSurfside, Park View Island, neSouth Miami Beach munharaunda yeFlamingo.
Florida International University purofesa Dr. Shimon Wdowinski akange afunda chirevo chekuvaka chakaburitswa gore rapfuura icho chaisanganisira Champlain Towers muSurfside Florida. Iye anonzwisisa kuti sei zvivakwa muMiami, Florida zvakavakirwa pamvura nyoro zvave kunyura.
Kutyisidzira kwekunyangarika kwemahombekombe kwayambira vazhinji kune njodzi dzekuchinja kwemamiriro ekunze. Kunyorova kunyanya - nekwanisiro yavo yekukanganisa maguta emahombekombe kubva kumafashama nedutu, uye kusefa kusvibisa - inopa dziviriro dzinogona kurasikirwa mune ramangwana.
Zvinoenderana neongororo iyi, chivakwa cheChamplain Tower Condo chaive chichi nyura pachiyero chemamirimita maviri pagore muma2 nekuti inogara kumatope akadzokororwa..
Mushumo mumwe chetewo wakaratidza mamwe masayiti matatu ainyura nekukurumidza - imwe muSurfside, paPark View Island uko kune dzimba uye chikoro chepuraimari padyo, uye maviri kumaodzanyemba kweMiami Beach munharaunda yeFlamingo..
Izvi zvinogona chete kutanga kwezvakawanda zvichauya zveiyi nharaunda inoshamisika, uye yekufamba uye yekushanya indasitiri muSouth Florida.
The Champlain Tower Condo chivakwa muSurfside yakadonha mazuva matatu apfuura uye inogona kunge yakauraya vanhu zana kana kudarika avo parizvino vanonzi vakashaikwa mumarara.
Miami Beach pakunyura Wetland
Shanduko yemamiriro ekunze ndeyechokwadi.
Dr. Shimon Wdowinski akagamuchira BSc muPasi Sayenzi (1983) uye MSc muGeology (1985) kubva kuHebrew University (Jerusarema, Israel) uye MS muUnijini Sayenzi (1987), uye Ph.D. muGeophysics (1990) kubva kuHarvard University. Akaitisa postdoctorate zvidzidzo kuScripps Institution yeOceanography (1990-1993); akashanda kwegore kuGeological Survey yeIsrael (1993-1994); akashanda kwemakumi gumi sedare redhipatimendi kuDhipatimendi reGeophysics nePlanetari Sayenzi, Yunivhesiti yeTel Aviv, kutanga semudzidzisi (mutevedzeri wapurofesa, 1994-1998) uyezve semudzidzisi wepamusoro (mudzidzisi wepurofesa, 1998-2004); uye akashanda kwemamwe makore gumi kuDhipatimendi reMarine Geosciences, Yunivhesiti yeMiami, kutanga semubatsiri wekutsvagisa purofesa (2005-2016) uyezve semupurofesa wekutsvagisa (2015-2016) Akabatana neDhipatimendi rePasi uye Zvakatipoteredza, Florida International University, mu2016 semubati wepurofesa akabatana.
Tsvagurudzo yaDr.Shimon Wdowinski yakanangana nekusimudzira nekushandiswa kwenzvimbo geodetic matekinoroji anokwanisa kunyatso kuona mafambiro madiki epasi. Akabudirira kushandisa hunyanzvi uhu kudzidza tectonic ndiro kufamba, kudengenyeka kwenyika, kuderera kwepasi, zviitiko zvekunyura, wetland hydrology, shanduko yemamiriro ekunze, uye kukwira kwemwero wegungwa.